वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा भन्नुहुन्छ– - Aarati Patrika
Home » News » वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा भन्नुहुन्छ–
in News, कसले के भने ? 2018-07-18	0 156 Views
अधिनायकवादी व्यवस्थामा नेतृत्व मात्र जोडिन्छ । ऊ हाँसेको राम्रो, उसले लगाएको जुत्ता राम्रो, टोपी राम्रो, उसले हेर्ने सिनेमा पनि राम्रो भन्ने मान्यताको विकास भएको हुन्छ । तर, तपाईंले भनेका नेतृत्वहरू अधिनायकवादी होइनन्, सर्वसत्तावादी हुन् । उदाहरणको रूपमा देउवाले अधिनायकवाद खोजे भन्दै कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिएका छन् । अधिनायकवाद त त्यो हो, जहाँ नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्ने कुनै अधिकार हुँदैन । तर, यहाँ त देउवातिर औँला ठड्याइएको छ । यसलाई कसरी अधिनायकवाद भन्ने ? देउवाले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा देश अधिनायकवादमा जान्छ भनेर गल्ती गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ । किनकि उहाँले असम्भव कुरा गर्नुभयो । अधिनायकवाद त त्यहाँ आउँछ, जहाँ जनता बोल्न सक्दैनन् । नेतृत्व पूर्णरूपमा हाबी हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यो सम्भव छैन । अमेरिकाजस्ता देशमा पनि राष्ट्रपति ट्रम्पको विरोध हुने गर्छ । त्यसैले त्यो अधिनायकवाद होइन । अमेरिकादेखि नेपालसम्म सर्वसत्तावादको अभ्यास भइरहेको छ भनेर कसैले भन्छ भने मात्र त्यसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन ।
पपुलिजम आफैँमा डरलाग्दो अभ्यास हो । यसको चरित्र के हुन्छ भने यसले हाम्रा जटिल समस्यालाई पनि सामान्य ढंगले उठान गर्छ र नेतृत्वलाई कार्टुनको पात्रजस्तै चमत्कारी बनाउँछ । कार्टुनको पात्रले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो शरीर, उचाइ, आकार आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सक्छ । त्यसैले सबै समस्या सजिलै समाधान गर्न सक्छ । त्यस्तै, पपुलिजम ‘ए हिस्टोरिकल’ हुन्छ, अर्थात् यसले इतिहासको वास्तविकता बिर्साइदिन्छ । अमेरिकाजस्तो देश, जो आफैँमा आप्रवासीहरूबाट बनेको हो, ट्रम्पकी श्रीमतीसमेत बाहिरबाट त्यहाँ पुगेकी हुन् । तर, राष्ट्रपति ट्रम्प आफैँ माटोबाट बनेको जस्तो गरेर आफूलाई भूमिपुत्र सावित गरिरहेका छन् । पपुलिजमले हिजोका साथी, हिजोको जेलनेल, हिजोको दुःखकष्ट बिर्साएर दम्भ बढाइदिन्छ । त्यही नेतृत्वले जनताको सम्पूर्ण समस्याको समाधान बताइरहेको हुन्छ्, जनता ताली पिटिरहेका हुन्छन् । अझ नेपालमा देखिएको पपुलिजमको अर्को विशेषता भनेको ‘एन्टी इन्टल्यक्चुअल’ हो । उसले बुद्धिजीवीलाई गाली गर्छ । पढेर हुन्छ ? परेर पो जानिन्छ भन्दै ज्ञानलाई अवमूल्यन गर्छ । त्यस्तै पपुलिजमले आफैँ षड्यन्त्र उत्पादन गर्छ, दुश्मनको कल्पना गर्छ । र, त्यसको विरुद्ध लड्ने योद्धा चाहियो भनेर आफूलाई अघि सार्छ । त्यस्तै बहुसंख्याको मन रिझाउन पपुलिजमले अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग, महिला दलित, तेस्रोलिंगीमाथि अन्याय गर्छ । पपुलिज्म मेजोरिटी सिस्टम हो, त्यसैले माइनोरिटीको आवाज कुण्ठित हुन्छ ।
Previous: आजको ताजा खबर
Next: सदनको असन्तुलन